Dib udhac kuyimi Shirka Maamul u sameynta Goboladda Jubbooyinka iyo Gedo | Somalisan.com Home
Dib udhac kuyimi Shirka Maamul u sameynta Goboladda Jubbooyinka iyo Gedo 2/23/2013 9:16:00 A
iyada oo Malamahaanba ay socotay qeyladhaan iyo codsiyo ku aadan in shirkaan dib loo dhigo ayaa haddana waxaa ka soo baxay dhawaq farxad iyo reynreyn galinaya dhamaan intii codsiyadaas laheyd hala aqbalo Waxaa dib loo dhigey shirkii Maamul u samaynta Jubbooyinka iyo Gedo muddo 6 maalmood ah sida ay noo xaqiijiyeen madax sarsare oo ka tirsan gudiga farsamada iyo maamulka Kismaayo. Sababaha waxaa lagu sheegey ergadii gobolka Gedo oo uu dib u dhac ku yimid xiligii ay Kismaayo iman lahaayeen. Sabab jiro awgood Somalisan.com
Xafiiska: Kismaayo Warar kale oo xiiso leh halkaan ka aqriso. tweet FG: Shabakada Wararka ee Somalisan Mas'uul kama ahan Cidii ku xadgudubto Shaqsi Raalina kama noqonayso Somalisan.com. Fikirkaaga hoos kadhiibo: